Matongerwo eNyika, 03 Zvita 2019
Chipiri 3 Zvita 2019
Zvita 03, 2019
VanaChiremba Voramba Kurudziro yaVaMnangagwa Yekuti Vadzoke Kubasa Mukati meMazuva Maviri
Hurumende inoti pane anachiremba vasingadariki makumi mashanu chete vadzoka kubasa zvichitevera mazuva maviri akatarwa nemutungamiri wenyika kuti vange vadzoka kubasa pasina mibvunzo.
America Inoti Mari Yayakapa Zimbabwe Yakawanda Kudarika Yakataurwa naVaMthuli Ncube muBhajeti
Mutevedzeri wemumiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe VaThomas Hastings vanoti gurukota rinoona nezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube havana kuzivisa nyika mari chaiyo yakapihwa Zimbabwe nenyika yavo apo vaitura hurongwa hwebhajeti.
Vanhu Vokurudzirwa Kuongororwa Ropa Kuti Vazive Pavamire paNyaya yeHIV/AIDS
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzinoti kunyangwe hazvo Zimbabwe yakatora matanho okuti munhu wese awane rubatsiro rwekuwana mushonga wekurapa chirwere cheshuramatongo cheHIV/Aids
Nhengo dzeZanu-PF muParamende Dzoferefeta MDC neKuramba Kucherechedza VaMnangagwa
Komiti inotungamira basa reparamende, yeStanding Rules and Orders yadoma nhengo pfumbamwe dzekomiti ichaongororo zvinonzi zviri kuitwa nenhengo dzeMDC muparamendezvekuramba kucherechedza mutungamiri wenyika.
Kukwira kweMitengo yeZvakawanda Kwosiya Veruzhinji, Varimi, Vaomerwa
Kunyange hazvo mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mngangagwa vakavimbisa masvondo mashoma adarika kuti hurumende ichadzorera mari muzvitengeswa senzira yekubatsira vanhu, vanhu vari kuti hapana chati chamboshanduka munyaya dzemitengo yezvinhu.
Varimi Vonetseka neMbeu neZvikwereti zveKurimisa
Kunyange hazvo mvura yakaturuka, vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti havasati vaisa mbeu pasi sezvo vasina zvekurimisa, kushaya mbeu pamwe nefotereza izvo zviri kudhura zvakanyanya.
Vatungamiri Vesangano reVadzidzisi reARTUZ Vomiswa Pamberi peDare
Hutungamiri hwesangano revadzidzisi vekumaruwa reARTUZ hwamiswa pamberi pedare ramejastiriti muHarare nhasi huchipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act
Asi gurukota rezvevashandi, Muzvinafundo Mavhimam vanoti hurumende haina zvaichakwanisa kuita mugore rino, vachiti zvekuwedzera vashandi mari zvinotozotarisirwa kuzoiswa mubhajeti regore rinouya.
Mabhishopu eRoman Catholic Anokurudzirwa Kushanda Nevamwe muKugadzirisa Zviri Kunetsa muNyika
Imwe nyanzvi mune zvehupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zve umbimbindoga.
Zvita 01, 2019
MDC Inoti Mapurisa Aridzira Pfuti Kuna VaChamisa paZuva reKudyara Miti reNational Tree Day
Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi varamba mashoko ekuti mapurisa ashandisa mabhara anouraya, vachiti hapana kumboridzwa pfuti, asi kuti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza.
Vanhu Vanoratidzira paGungano reKucherechedza Zuva reWorld Aids Day kuMasvingo
Vanhu varatidzira ava vaita izvi kuburikidza nekurara pasi panguva iyo VaMoyo vanga vachitura mashoko avo kuvanhu vaungana pachiitiko ichi, uye vati vatora danho iri senzira yeratidza hurumende kutsutsumwa kwavo nekushaikwa kwemishonga uye vanachiremba muzvipatara zvehurumende.
United Nations Population Fund Yokurudzira Kumiswa kweMhirizhonga Mazuva Ose ePagore
United Nations Population Fund nemusi weChina svondo rapfuura yakaparura muzinda wekupotera kana vasangana nemhirizhonga yemudzimba kana kumbunyikidzwakana kuti One Stop Centre.